Famatsiana herinaratra :: Hampihena ny saran-jiro ny fahavitan’ny tetikasa Volobe • AoRaha
Famatsiana herinaratra Hampihena ny saran-jiro ny fahavitan’ny tetikasa Volobe
Nomen’ny fanjakana alalana hitrandraka herinaratra ao amin’ny toho-dranon’i Volobe any Toamasina, ny “Compagnie Générale Hydroélectriqe de Volobe” na ny CGHV. Any amin’ity kaompania ity ny orinasa Jiro sy Rano Malagasy (Jirama), avy eo, no hividy herinaratra. Tombontsoa maro no hositrahina amin’ity fiaraha-miasa ity satria ho lasa 259 ariary na 0.07 dôlara ny saran’ny famokarana ny 1 KiloWattHeure (KWH) raha toa ka 925 ariary na 0.25 dôlara izany, amin’izao fotoana izao. Tontosa, omaly, ny fifanaovan-tsonia sy ny rango-pohy amin’ireo fifanaraham-piaraha-miasa ireo.
Nohazavain’ny tale jeneralin’ny Jirama, Andriamanga Vonjy, fa: “hananganana tobim-pamokarana herinaratra vaovao, izay afaka mamokatra herinaratra 120 MégaWatt ho an’ny faritra Atsinanana sy tambajotra iraisan’Antananarivo ny ao Volobe”. “Hanomboka, amin’ity taona ity, ary ho vita mialoha ny taona 2023 ny asa fanorenana. Mandritra ny 35 taona no hitrandraka herinaratra ao amin’ny toho-dranon’i Volobe ny CGHV. Tokantrano maherin’ny enina alina sy telo hetsy no hisitraka ny famatsiana ary olona efajato no hahazo asa mandritra ny fanatanterahana ny tetikasa”, hoy izy.
Natao tetsy amin’ny foiben’ny minisiteran’ny Angovo, ny rano sy ny akoran’afo, tetsy Ampandrianomby, omaly, ny fifanaovan-tsonia hividianan’ny Jirama herinaratra any amin’ny kaompania CGHV sy ny rangom-pohy hanomezan’ny fanjakana alalana an’io kaompania io hitrandraka herinaratra avy amin’ny toho-dranon’i Volobe